Trenbolone Acetate (Tren ace) vovoka (10161-34-9) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Anabolika Steroids / Trenbolone poids Series / Trenbolone Acetate (Tren ace) poids
3.00 avy amin'ny 5	miankina amin'ny 3 mpanjifa naoty
SKU: 10161-34-9. Sokajy: Trenbolone poids Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maotera avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Trenbolone Acetate (Tren ace) poids (10161-34-9), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Trenbolone Acetate (Tren ace) video volo
Rano Trenbolona Acetate (Tren ace) poeta ireo karazana fototra
Name: Trenbolone Acetate poids
Formula Molecular: C20H24O3
Meny fitetezana 312.4
Storage Temp: 0-6 ° C
Rano Trenbolone Acetate (Trena ace) fampiasana vinaingitra amin'ny steroids cycle
Trenbolone Acetate volo dia antsoina hoe Tren A, Tren ace poèteur (CAS 10161-34-9), Revalor, Finaplix, Finajet, avy amin'ny mpandoro biriky na tompon'ny UGL.
Rombo Trenbolone Acetate ny fampiasana vovoka
Trenbolona Acetate poeta dia matetika ampiasaina amin'ny doses amin'ny 35-150 mg / andro, ary amin'ny ankapobeny 50-100 mg / andro.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mahita ny 50-75 mg / andro ho faran'izay tsara amin'ny tahan'ny dosage, izay manome tombony tena tsara amin'ny ampahany amin'ny steroid anabolic steroid.
Ny tsimokaretina Acetate Trenbolona (CAS 10161-34-9) dia matetika ampiasaina amin'ny doses amin'ny 35-150 mg / andro, ary amin'ny ankapobeny 50-100 mg / andro. Ny endrika 35 mg amin'ny ankapobeny dia amin'ny ankapobeny raha tsy mibaribary ny tsimok'aretina manokana amin'ny trangan-javatra hafa amin'ny tranbolone. Raha ilaina ny fampiasana tranbolone io ambany io ary ilaina ny fihodinana mahomby, dia tokony hampidirina steroid hafa anabolic hafa. Masteron dia safidy tsara ho an'izany. Ny iray hafa, safidy hafa dia testosterone.
Raha ny amin'ny 150 mg / tarehimarika avo lenta dia ampiasaina amin'ny ankapobeny ny fanentanana ny rafi-pitabatabem-batana raha ampitahaina amin'ny 100 mg / andro fa tsy amin'ny fanatsarana betsaka na tanjaka, izay efa maika na maika be indrindra amin'ny 100 mg / andro.
Ireo tsiranoka miligrama ireo dia ambany ambany noho ny steroid anabolic. Ny antony iray dia satria ny hery faran'izay sarotra dia mahavariana (mahomby isaky ny miligrama). Ny antony iray hafa dia noho ny hazavana acetate dia tsy dia mazava loatra, ny ampahany betsaka amin'ny lanjan'ny molekule Trenbolone Acetate dia ny steroid.
Fampitandremana amin'ny Roha Tren ace vovoka
Ny tsy fahampian-tsakafo Equipoise dia ny antsasaky ny androm-piainany, izay mety farafaharatsiny 12 andro. Izany dia miteraka vanim-potoana lava aorian 'ny famoahana farany izay tsy dia ambony loatra ho an'ny anabolism, na tsy ampy ambany loatra mba hamelana indray ny fahasitranana. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny fampiasana Equipoise amin'ny ampahany vao haingana.
Etsy ankilany, ny isan-jato eo amin'ny steroidact activeotope tranbolone enanthate dia efa ho 20% ambany. Noho izany antony izany, ny dosia mitoka-monina isan-kerinandro ho an'ny tranbolone enanthate dia ambony lavitra noho ny an'ny acetate. Ho an'ny fitaterana, ny dosing total isa isan-kerinandro dia matetika 300-800 mg.
Tsy toy ny vovon-tsakafo Trenbolone izay manana ny antsasaky ny androm-piainan'ny andro 1 ary tokony hampidirina isan'andro, ny tranbolone enanthate dia nampidirina indraindray 2-4 isan-kerinandro. Ny antsasaky ny fiainana dia mety amin'ny 5 andro.
Raha tsy azonao antoka ny valintenin'ny tena manokana amin'ny tranbolôna, dia aleo kokoa ny esterate acetate raha esoriny haingana ny rafitra. Tena mahafinaritra ihany koa ny fampiasana bisikileta fohy na mandritra ny herinandro faran'ny lasitra lava kokoa satria ny fiverimberenana haingana dia manome fiovàna haingam-pandeha avy amin'ny fananana avo lenta ho an'ny vokatra tsara indrindra ho an'ny ambaratonga ambany izay ahafahana manavao.
Raha ampiasaina ny tranbolone dia tsy ilaina mba hahazoana valiny mahafa-po amin'ny famokarana steroid anabolika, mety ho fanampiana miavaka amin'ny vokatra toy izany.
Row Tren ace poids (CAS 10161-34-9)
Trenbolone Acetate poids-melting point = 200-205 F / 90-92 ° C
Trenbolone Acetate vovoka Marketing
III. tsena Trenbolone Acetate (Tren ace) HNMR poids
Ahoana no hividianana voly Trenbolone acetate (CAS 10161-34-9); Buy Tren ace powder from AASraw
Ny AASRaw dia manome ny fahadiovana 99% trenbolone hohanina vovony mena ho an'ny mpandatsa-bazana na laboratoara ambanin'ny tany mba hampiasaina amin'ny fampiasana fitaovana ho an'ny tombotsoam-bidy, ny tanjaka matanjaka.
10g Trenbolone dite acetate
Aiza no hividianana voly Pulcinella Acetate?
Ahoana ny fomba hanamboarana vovony kitay?
Tsy misy olona hilaza aminao ny zava-misy 10 momba ny Trenbolone Acetate